maitiro ekurodha pasi nekuisa fortnite pane yako Android foni
Kuru Nhau & Ongororo Maitiro ekuisa Fortnite pane yako Android foni
Mushure mekutanga nharembozha yayo seyakatemerwa, kukoka-chete iOS yakasarudzika, iyo yakakurumbira mukurumbira royale mutambo Fortnite yakaita nzira yayo kuenda kuApple svondo rapfuura ... senguva yakatarwa, yekukoka-chete Samsung yakasarudzika. Neraki, mushure mekunge buzz yakakomberedza ichangobva kuziviswa Samsung Galaxy Note 9 yadzikira zvishoma, Fortnite iri kuuyawo kune mamwe mafoni zvakare, asi iyo yekukoka-chete chinhu chiri kutamba.
Pamazuva mashoma apfuura, Epic Mitambo yatanga kutumira macode ekukoka beta, nokudaro ichibvumira vashandisi veApple kuti pakupedzisira vawane kuravira kwemutambo. Aya ndiwo mavambo Fortnite akatanga paIOS pakutanga kwegore rino zvakare - paive nerondedzero yekumirira yawaifanira kusaina mukati, kuti uwane kodhi yekukoka, uye kunyangwe vanhu vakaiona ichinetesa, isu tinofungidzira Epic mitambo ine zvikonzero zvadzo zvinyoro -kuvhura mutambo pamapuratifomu ese ari maviri.
Sezvaungave iwe uchiziva, zvisinei, iyo Android kuvhurwa kweFortnite kwakasiyana mune izvo mutambo hausi kuwanikwa paGoogle Play Store . Pane kudaro, Epic Mitambo yakasarudza kuigovera iri yega, pamwe kuitira kudzora iyo 30 muzana yakatemwa Google inowana pane yega yega yekutenga-mu-app (uye mukomana, aripozvakawandaye-in-app kutenga kunoenderera muFortnite). Ehezve, varidzi veSamsung vane zvishandiso zvinoenderana vanogona kuwana Fortnite kurudyi pane peji rekutanga reGreen Apps chitoro, asi munhu wese achafanirwa kutora iyo APK inotumirwa tsamba kwavari kubva kuEpic Games uye nekumisikidza pamafoni avo.
Vashandisi vane ruzivo vanogona kunge vasina zero nematambudziko neizvi, asi vamwe vashandisi vasina kujairika vanogona kuzviwana vachityisidzirwa nekuchengetedzwa kunoitwa nekuregedza faira reAPAP, saka takafunga kuti isu & apos; d tinoita kuti zvinhu zvive nyore kwavari. Aya ndiwo maitiro ekuisa Fortnite pane yako Android foni.
Ona kana mudziyo wako uchitsigirwa
Kana iwe uine Samsung Galaxy S7 kana modhi nyowani, unogona kurodha Fortnite izvozvi. Zvese zvaunoda kuti uite kupisa Moto maGapplication uye kuitsvaga (asi izvozvi maap & s; anoratidzwa pane peji rekutanga). Kana iwe uine imwe yerudzi rwefoni, ungangoda kutarisa izere rondedzero yemidziyo yakatsigirwa pamusoro paEpic Games 'webhusaiti. Iyo rondedzero inosanganisira mamodheru ne LG, Huawei, OnePlus, Asus, Xiaomi, pamwe neese mafoni ePixel, pakati pevamwe.
Kana iwe usingakwanise & apos; kuwana foni yako pachinyorwa, usanetseke, sezvo ichiri kutsigirwa, chero ichizadzisa zvinotevera zvinodiwa: inomhanya 64-bit vhezheni ye Android (5.0 kana yepamusoro), ine 3GB kana kupfuura RAM, uye ine GPU yakatsigirwa (Adreno 530 kana yakakwira, Mali-G71 MP20, Mali-G72 MP12 kana yepamusoro).
Nyoresa uye mirira kukoka kwako
Kana iwe & apos; kuruma zvakare kusvetukira muhondo royale kupenga iyo iri Fortnite, iwe & apos; zviri nani kusaina kukoka kodhi ASAP. Kuti uwane pane zvakarongwa, enda ku Epic Mitambo 'yepamutemo webhusaiti uye nyoresa neyako email kero.
Kana iwe uchitamba Fortnite pane mamwe mapuratifomu, ita shuwa yekusaina neako Epic matsamba, kana kushandisa yako PlayStation Network kana Xbox Live account, kuti iwe ugone kuita kufambira mberi kwako kuwiriraniswe neiyo Android vhezheni yemutambo. Paunenge iwe & apos; waita izvo, iwe & apos; uchafanirwa kutamba mutambo wekumirira. Isu tinozviziva & apos; hazvinakidze, asi hapana & maapos hapana nzira yekutenderedza izvo kana iwe uchida kuve pakati pekutanga kupinda muchiito.
Hatikwanise & apos; titi zvechokwadi zvinotora nguva yakareba sei kuti uwane kokero, asi inofanira kunge iri mubhokisi rako rekunyora mukati memazuva mashoma kusvika pavhiki kubva kwauri kusaina. Epic Mitambo iri kutumira makodhi mumafungu, izvo zvinogona kureva kuti mazana, pamwe zviuru, zvevanhu vari kugamuchira macodhi mazuva ese.
Dhawunirodha uye gadza Fortnite pafoni yako
Paunenge Epic Mitambo ikakujekesa iwe, iwe & apos; uchagamuchira email yekukoka iyo ichave iine yekurodha chinongedzo cheiyo Fortnite installer app. Ndizvozvo & apos; ndizvozvo, unofanirwa kutanga waisa iyo yekuisa kuitira kuti umise mutambo chaiwo. Neat-o (?) Iri app rinodikanwa kunyangwe pamaSamsung zvishandiso, asi rinogona kutorwa pasi kubva kune yepamutemo Galaxy Apps chitoro.
Paunowana iyo email kubva kuEpic, zvinoenderana neyako chengetedzo, iwe & apos; ungangobvunzwa kupa Android mvumo yekuisa maapplication kubva kune 'Asingazivikanwe' zvinyorwa. Kana iwe usingade kuchengeta iyi mvumo ON mushure mekunge iwe & apos; yaisa Fortnite, unogona kuipa iyo chikamu chete, kana neimwe nzira enda kuZvirongwa> Chengetedzo uye udzivise iyo kubva ipapo gare gare.
Kana iyo Fortnite inosimudza iri pafoni yako, unogona kuenda kumberi uye kuzvipisa kuti utore mutambo chaiwo. Uye iwefungaiyo yakadzingwa, unogona kuivhura kuti uone kuti pane & apos; s inowedzerwa 1.04GB kurodha pasi. Hongu, ndeimwe yeayo, asi maapos anotarisirwa, tichifunga nezvehukuru hwemutambo.
Samsung galaxy s7 kumucheto phonearena
yakanakisa yepakati renhare foni 2019 usa
Maitiro ekunyatso kugadzirisa simba re-Wi-Fi pane yako smartphone
Google & apos; s Pixel 5 inoenderera ichitengeswa kuAT&T nhasi padhuze nePixel 4a 5G preorder
Garmin anoburitsa peya nyowani yeVapamberi - iyo 945 LTE uye 55
Akanakisa Amazon Prime Day 2021 Kamera inobata
Yakanakisa iPhone 12 uye 12 Pro kesi